Ubalelwa ku-R2.6m umonakalo odaleke eMoses Mabhida Stadium | News24
Ubalelwa ku-R2.6m umonakalo odaleke eMoses Mabhida Stadium
IMeya kaMasipala weTheku uZandile Gumede isiqinisekisile ukuthi umonakalo odaleke eMoses Mabhida Stadium ngesikhathi kuqhubeka udlame ngoMgqibelo ubalelwa ku-R2.6 million.
Ngemuva kokuguqisa iKaizer Chiefs ngo-2-0 koweNedbank Cup, iFree State Stars ayizange ikwazi nokubhiyoza kahle njengoba abalandeli baMakhosi bavele bagasela enkundleni bashaya onogada bephula nezinsizakusebenza zabezindaba.
Abalandeli babezwakalisa ukudinwa kwabo kulandela ukuphunyukwa enye inkomishi kule sizini.
Ngemuva kwalo mdlalo obengumqeqeshi uSteve Komphela wabe esebeka phansi izintambo.
OLUNYE UDABA: I-SAFA inxusa umphakathi ukuba usize kutholakale 'izixhwanguxhwangu' kolwaseMoses Mabhida
"Okokuqala ngithanda ukuzwakalisa ukuthi ngiyalugxeka kakhulu lolu dlame, ukucekelwa phansi kwempahla kanye nobuxhwanguxhwangu okwabonwa wumhlaba wonke ngoMgqibelo," kusho uGumede, kubika i-website ye-eNCA.
"Ngisho kungathiwa udinwe kangakanani, akumele lokho kuphethe ngezigameko zodlame kuze kulimale abantu abangenacala ngenxa yomdlalo.
"Abathandi bomdlalo yibo okumele engabe bawuqonda kahle lo mdlalo, akukhathaleki bayawina noma bayahlulwa. Uma uhluliwe akumele kube khona umuntu ozizwa engasaphephile futhi akumele kube khona mpahla ecekelwa phansi."
NgoMsombuluko, kuvele enkantolo lowo ongumsolwa kulezi zidubedube kanti uGumede uthi uyethemba ukuthi nabanye basazoboshwa maduze.